मधेस आन्दोलन हिंस्रक हुँदा बाबुरामलाई चिन्ता !-NepalKanoon.com
मधेस आन्दोलन हिंस्रक हुँदा बाबुरामलाई चिन्ता !
मंसिर ५, काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले तराई मधेसमा जारी आन्दोलन आन्दोलनकारीको हातबाट फुत्कँदै गएको बताएका छन् ।
शनिबार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै भट्टराईले वार्ता र सम्वादबाटै मधेसको समस्या समाधान गर्नु पर्ने बताए । रोग एकतातिर छ अर्कोतिर उपचार गरेर हनु भन्दै उनले भने-‘छठपछि वार्ता अघि बढ्नुको सट्टा गतिरोध देखिएको छ । तराई मधेसको आन्दोलन आन्दोलनकारी शक्तिको हातमा नरहने र अराजकतातिर जाने डरलाग्दो संकेत देखिएको छ ।’
एम्बेलुन्समा तोडफोड गर्ने, औषधि जलाउने काम राजनीतिक आन्दोलनकारीबाट हुन नसक्ने उनको निष्कर्ष छ । ‘यसले के देआउँछ भने आन्दोलनकारीको हातबाट यो फुत्कँदैछ र अराजक तत्वको हातमा जाने खतरा छ’ पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने-‘आरोप प्रत्यारोप होइन । हामी सबैले आ-आफ्नो गल्ती स्वीकार गरौं र गम्भीरतापूवर्क वार्तामा बसौं ।’
वार्ताको पहल सरकार र सरकारमा रहेका दलहरुले लिनु पर्ने भन्दै उनले सहयोग आफू तयार रहेको बताए । सचेत नागरिकको हैसियतमा आफू सत्तारुढ र आन्दोलनरकारी दुबै पक्षसँग सम्वादमा रहेको भन्दै भट्टराईले भने-‘यो हाम्रो देशको आफ्नो समस्या हो र आफैंले हल गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति म जुनसुकै भूमिका निर्वाह गर्न, सहयोग गर्न म तयार छु ।’
भट्टराईले संविधान जारी गर्ने बेलामा नै आफूले सचेत गराएको तर, ठूला नेताहरुले नसुनेको गुनासो गरे । संविधान कुनै एक पक्षले भने जस्तो नहुने भएपनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व र संघीय प्रदेशको सीमांकन विगतका सहमति भन्दा फरक भएको उनले बताए ।